Bangiga Dhexe oo amar kasoo saarey diidmada 50-ka dollar | KEYDMEDIA ONLINE
Bangiga Dhexe oo amar kasoo saarey diidmada 50-ka dollar
Diidmada ayaa timid kadib markii sida la sheegay suuqa lasoo geliyay lacago been abuur ah, oo dadka lagu dhacayo hantidooda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa soo saarey qoraal uu ku amrayo bangiyadda iyo Xawaaladaha gaarka loo leeyahay ee dalka inay qaataan lacagta 50-ka dollar, si lamid ah lacagaha kale.
Go'aankan ayaa yimid kadib kulan Bangiga Dhexe la qaatey Madaxda Bangiyada iyo Xawaalaha Muqdisho, waxaana la isku afgartay in la socodsiiyo 50-ka dollar kadib markii la xaqiijiyo in aysan jirin lacag been abuur ah.
Somaliland ayay ahayd meeshii ugu horeysay Soomaaliya oo laga diido 50-ka dollar, oo ka noqday hadda warqad aan waxka tareynin, waxaana xigtay Muqdisho oo ganacsatada diideen qaadashada $50.
Soomaaliya waa dal mudo ka badan 20 sano aan haysan lacag uu leeyahay, oo maamulkiisana uu koontarooli karo, maadaama ay meesha ka baxday lacagtii qaranka, oo ugu dambeeyo kunka shilin oo hadda duugoobay, kana sii dabar go'aya wadanka.
Lacagta Mareykanka ee dollar-ka ayaa noqotay lacagta kaliya ee ka shaqeysa Soomaaliya, waxaana ku dhacday shacabka dhibaato dhaqaale oo xooggan iyo sicir barara baahsan oo saameeyay qoys kasta.